FBSသည် Lombokကျွန်းသားများအား ထောက်ပံ့ရေးကူညီပေးခဲ့ပါသည်
FBSမှ Lombok၊ အင်ဒိုနီးနားရှိ ကြောက်မက်ဖွယ်ငလျှင်ဒဏ် ဒုက္ခသည်အားလုံးထံ ၎င်း၏ စာနာမှုကိုဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုများ ပေးပို့ခဲ့သည်.
ဒီကြီးစွာသော ငလျှင်သည် Lombokကျွန်းတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သမျှထဲမှာ အပြင်းထန်ဆုံးလို့ယူဆရပါသည်။ FBS အဖွဲ့မှ အပျက်အစီးဒဏ်ခံရသူအားလုံးအား ထောက်ပံ့ပေးလိုပြီး၊ အပြောနဲ့မဟုတ်၊ အလုပ်နဲ့သက်သေပြပါတယ်! FBS အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ FBS ထရပ်များသည် စောင်၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါးနဲ့ အကူညီများထောက်ပံ့ပေးရန် Lombokကို ဦးတည်ကာ ဘာလီကျွန်းကိုထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ စေတနာဝန်ထမ်းများအကူညီဖြင့်၊ လူမှုထောက်ပံ့ရေးအကူညီများကို ကျွန်းရှိမတူညီတဲ့ ၁၀နေရာသို့ ဖြန့်ဝေရန် စီမံနိုင်ခဲ့ပါသည်!
FBS ဟာ အမြဲတမ်း သင့်ဘက်မှာရှိပါတယ်! ကောင်းတာ တူတူလုပ်ရအောင်!